Ithegi: Ingeniso ye-Ecommerce | Martech Zone
Ithegi: Ingeniso ye-Ecommerce
I-KISSmetrics ikhuphe usetyenziso lwe-iPhone ESIMAHLA olubizwa ngokuba luHlaziyo lwam. Yeyona ndlela ikhawulezayo yokubona ukuba i-Google Analytics yenza njani xa ukude edesikeni. Kwangoko kulo nyaka, abantu be-KISSmetrics bebefuna usetyenziso olufanelekileyo lweGoogle Analytics ukubanceda ukugcina iithebhu kwidatha yabo. Kwaye ababanga nako ukuyifumana. Nokuba usetyenziso lweselfowuni lwaluyi-WAY olusisiseko kwaye alunakuvumela ukuba wenze uthelekiso, okanye